चण्डीले चाहेका भए ५ वर्षअघि नै बैंकको कालोसूचीमुक्त हुन्थे, यस्तो छ नालीबेली  Clickmandu
चण्डीले चाहेका भए ५ वर्षअघि नै बैंकको कालोसूचीमुक्त हुन्थे, यस्तो छ नालीबेली
क्लिकमान्डु २०७५ चैत २८ गते १८:१० मा प्रकाशित
काठमाडौं । तपाईंसँग बैंकबाट लिइएको ऋण नतिर्ने हिम्मत छ ? पक्कै पनि छैन । किस्ता तिर्न २/४ दिन ढिलो भयो भने बैंकका कर्मचारीले फोन गरेर हैरान पार्छन् ।
खराब ऋणीको सूचीमा राख्ने धम्की दिन्छन् । त्यति गर्दा पनि तिरेन भने ऋण लिँदा राखेको धितो लिालम गरेर असूलीको प्रक्रियामा लैजान्छन् ।
बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नित भन्दा सुख पाइँदैन । बैंकले ३ पुस्ताको विवरण राखेर सूचना निकालेर बाबुबाजेको समेत बेइज्जत गर्छन् । बैंकलाई ऋण असूली गर्न कानूनले यो अधिकार दिएको छ । त्यसैले बैंकबाट ऋण लिनुअघि तिर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर ५०औं पटक सोच्नुपर्छ ।
तर, यही समाजमा एउटा यस्तो व्यक्ति छन्, बैंकबाट लिएरको ऋण नतिरी खुलेआम बैंकको विरोध गर्दै हिँड्छन् । ती व्यक्ति हुन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल ।
अब प्रश्न उठ्छ तपाईहामीलाई नछाड्ने बैंकले चण्डीराजलाई किन छाड्यो त ? सबैलाई बराबर कानून लाग्नुपर्ने होइन र ?
हो । तपाईंहामीले यसरी ऋण नतिरेको भए यतिखेर बैंकिङ कसूरमा जेलभित्र हुने थियौं ।
तर शक्तिको आडमा वर्षौंदेखि चण्डीराजले कानूनलाई लत्याउन सफल भएका छन् ।
नेपाला उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको सरकारपछिको शक्तिशाली सञ्जाल भएको संस्था हो । ढकाल त्यही महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यो उनको एउटा शक्ति हो ।
ढकालको दोस्रो शक्ति भनेको उनका आफन्तहरु राज्यको उच्च ओहोदामा थिए ।
यी दुई कारणले उनी बैंकिङ कसूरमा जेल जानबाट जोगिँदै आएका छन् ।
कुनै बेलाका भेट्रान व्यापारी थिए ढकाल । त्यसैले बैंकले ऋण नपत्याउने कुरै भएन ।
माओवादी द्धन्द्ध भयो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनेन । जसले अरु उद्योगीलाई जस्तै चण्डीराजलाई पनि समस्या भयो ।
तर, अरु उद्योगीहरु बैंकको ऋण तिरे । चण्डीराजले उद्योग राखेको जग्गा बेचिसकेका छन् । जग्गा बेच्दा राम्रै पैसा पाए पनि बैंकको ऋण नतिरि बसे ।
पटक पटक गरेर पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ढकालले ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ढकालले सञ्चालन गरेको
‘मोमेन्टो एपेरल्स’ले लिएको ऋण नतिरेको १५ वर्षभन्दा बढी भइक्यो । मोमेन्टो एपेरिएल्स प्रालि सन् २०१२ बाट बन्द भयो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार अहिले सावाँ, ब्याज र हर्जना गरी ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिएकोछ ।
बैंकले ऋण तिर्नका लागि चण्डीलाई पटक पटक ताकेता नगरेको पनि होइन । तर, उनी मन्त्री, प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली नेता, गभर्नर, सचिव, प्रहरी प्रशासन लगायतलाई भनसुन गर्न लगाएर अहिलेसम्म ऋण नतिरी बसेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका बहालवाला अध्यक्ष भएका कारण त्यो बेला वाणिज्य बैंकले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि चण्डीराज सँधैजसो महासंघको छायाँ अध्यक्ष बनिरहे । जसकारण बैंकले चण्डीराजको कर्जा असूलीको प्रक्रिया अघि बढायो कि उद्योग वाणिज्य महासंघको टोली नै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायतकहाँ पुगेर दबाब दिन्थे । दिइरहेका छन् । महासंघको संस्थागत दबाब सामू सरकारको केही चलेन । र, ऋण असूली प्रक्रिया अघि बढेन ।
चण्डीराज बैंकसँग नेगोसेसन गर्न गए । त्यो बेला उनले तिर्नुपर्ने करिब अर्ब पुगिसकेको थियो । लामो छलफ पछि ५५ करोड रुपैयाँ तिर्ने भए बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउने नेगोसेसन भयो ।
तर, उनले आफूसँग १०/१५ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको भन्दै त्यत्रो पैसा तिर्न नसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत ऋण नतिरे कानूनी प्रक्रियाबाट असूल गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अब बचाउन नसक्ने बताएपछि चण्डीले बैंकसँग नेगोसेसन गरिरहेका छन् । नेगोसेसनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अहिलेका केही पदाधिकारी पनि लागेका छन् ।
असारसम्ममा ऋण चुक्ता गर्नेगरी नेगोसेसन भइरहेको बैंक स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार अहिले पनि ५० करोडमै सल्ट्याउने गरी नेगोसेसन भइरहेको छ । तर, अन्तिम चरणमा भने पुगिसकेको छैन ।
‘अब पनि ऋण चुक्ता भएन भने हामी कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।
विशेष साधारणसभाबाट विधान संसोधन समितिका संयोजक नै चण्डी बनाइए । अबको एक महिनाभित्रमा महासंघको साधारणसभा हुँदैछ । यसमा चण्डीले बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने प्रावधान हटाउन खोजेका छन् ।
आगामी चैतमा हुने महासंघको अधिवेशनबाट आफूले भनेको मान्छे अध्यक्ष बनाउन पाइयो भने आफू छायाँ अध्यक्ष हुने र यस्तै बार्गेनिङ गर्न पाइने सपना सपना देखेर चण्डीराज महासंघको राजनीति भित्र सक्रिय बनिरहेका छन् ।